Oromoon Sirna Nafxanyaa Oromiyaa irratti ijaaruuf filannoo geggeefamu irratti hirmaachuu hin Qabu! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooOromoon Sirna Nafxanyaa Oromiyaa irratti ijaaruuf filannoo geggeefamu irratti hirmaachuu hin Qabu!
Waamicha lammummaa: Ummataa Oromoo Bal’aaf Miidiyaalee Oromoo Hundaaf Firoottan Oromoo Hundaaf
Ummanni Oromoo waanjoo gabrummaa ofirraa darbuuf bara dheeraaf qabsoo hadhooftuu godhee wareegama ulfaataa baasaa as-gahuun isaa addunyaa irraa dhokataa miti. Keessattuu, bara 2014-2018 ilmaan qaqqaalii kumaatamaan itti wareegee mootummaa cunqursaa EPRDF sabaaf sab-lammoota irraa buqqisee TPLFn maqaleetti erga galcheen booda abdii guddaa horatee ture. Haa ta’u malee OPDOn TPLF waliin saba keenya miidhaa turte “nuti TPLFn dirqamne malee saba keenya hin miinu” jechuun afaan mi’eeffattee injifannoo saba keenyaa jalaa buttee diinaaf (nafxanyaaf) kennite. Gaaffii sabni Oromoo bara dheeraaf gaafataa ture tokkollee otuu hin deebisin, akkuma bara TPLF, ammallee Oromoo diina godhattee leelliftoota sirna nafxanyaa fira taasifachuudhaan, waggoota sadan darban midhaa hamaa saba keenyarraan gahaa turte. Hadhas gahaa jirti.
Akkuma Oromoo waggoota kuma dudduubatti hanbifna jedhan,filannoo Oromoon keessatti hin hirmaanne qopheeffachuun Oromoo waanjoo garbummaa isa dhumaatti galchuuf karooreffatanii halkaniif guyyaa hojjiitti jiru.
Dhaabboliin bilisa ta’an mirga abbaa biyyummaa keetiif falman ABO fi KFOn akka filannoo kana irratti hin hirmaanne dhiibanii tapha siyaasaa keessaa ala taasisuun akka ati carraa jara filachuu hin arganne si godhaniiru.
Karaa biraatiin garuu dhaabbolii siyaasaa nafxanyaaf haala mijjeessanii akka isaan hanqina tokko malee filannoo kana irratti hirmaataa jiranu atuu argaa jirta. Fakkeenyaaf waltajjii marii morkattootaa jedhanu irratti akka Oromoon qooda hin fudhanne godhamee atuu argaa jirta.
Oromiyaan akka biyyaattimaapii (kaartaa) biyyoolessaa irraa haqamtee nafxanyaan akka isaaf ta’utti impaayera ijaarata.